Qodobka macluumaadka - SmartMe
Dom » Qodobka macluumaadka
Anigoo isku qoraya joornaalka joornaalada, Waxaan oggolahay in la habeeyo xogtayda shaqsiyadeed ee ujeedada loo leeyahay hirgelinta adeegga warsidaha, oo ay kujirto macluumaad ku saabsan howlaha Maamulka hadda socda, iyada oo la raacayo Qodobka 6-aad qodobka. 1a GDPR.
Iyadoo la raacayo farshaxanka. 13-aad 1 iyo sadarka 2 ee Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta Shakhsiga ee Abriil 27, 2016. Waxaan ku ogeysiinayaa taas:
1. Maamulaha xogtaada waa Ariel Zgórski, oo maamula ganacsi SmartMe Ariel Zgórski xafiiskeeda ka diiwaangashan Katowice, ul. St. Janawari 11/4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.
2. Xogtaada shaqsiyadeed ee laga baaraandegayo ayaa loo baarayaa si loogu bixiyo adeegga warsidaha ay kujirto macluumaad kusaabsan howlaha hada socda ee Maamulka, iyadoo la raacayo Qodobka 6-aad qodobka 1-aad. XNUMXa GDPR.
3. Qaataha xogtaada shaqsiyadeed waa shaqsiyaad uu fasaxay Maamulaha, hey'adaha la fasaxay iyadoo la raacayo qodobbada sharciga, iyo hay'adaha dibadda ah ee ku hoos jira heshiisyada la saxiixay.
4. Xogtaada shaqsiyadeed ayaa la kaydin doonaa ilaa laga noqdo ogolaanshaha hawshaada.
5. Xogtaada shaqsi looma wareejin doono wadamada sedexaad iyadoo qeyb ka ah ujeedada howsha.
6. Waxaad xaq u leedahay inaad marin u hesho xogtaada, xaq u leedahay inaad saxdo, tirtirto, xaddiddo ka shaqeynta, xaq u lahaanshaha gudbinta, xaq u lahaanshaha diidmada, xaq u lahaanshaha inaad ka laabato ogolaanshada waqti kasta adigoon saameyn ku yeelan sharci ahaanta howsha, taas oo lagu fulinaayay ogolaanshaha ka hor ka bixitaankeeda.
7. Waxaad xaq u leedahay inaad u xereyso cabasho qeybta kormeerka marka aad aamminsan tahay in ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyeed ay jabineyso qawaaniinta Sharciga Ilaalinta Guud ee Xogta ee 27 Abriil 2016.
8. Bixinta macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed waa ikhtiyaari.
9. Xogtaada shakhsi ahaaneed kuma qasbanaan doonto go’aaminta otomaatig ah ama baaba'aan.